पेरिस एक सर्फ-प्रेरित कफी पसल तपाईं प्राप्त के एक Aussie र Frenchie कफी पसल सुरु गर्दा हो, संसारमा सबै भन्दा प्रसिद्ध क्याफे संस्कृति Obsessed शहर मध्ये. यो युरोप मा हाम्रो सबै भन्दा राम्रो कफी पसल सूची मा उच्च बनाउँछ.
यस्तो Mok रूपमा प्रतिष्ठानबाट धन्यवाद, ब्रसेल्स मा युरोप नक्शा सबै भन्दा राम्रो कफी पसल यसको स्थान कमाउन छ.
तिनीहरू जो उच्चतम गुणस्तर को हुनुको यसलाई अनुवाद आफ्नो कफी सिमी रोस्ट.
यो स्वराङ्कित गरिएको छ कफी को थिएटर. यो निश्चित युरोप सूचीमा हाम्रो सर्वश्रेष्ठ कफी पसल मा एक ठाउँ छ. यो ठाउँ कफी परम्परा को एक उत्सव हो र एक राज्य एक टेस्टिङ कोठा छ कला Roastery. लाग्छ विली Wonka कफी पूरा.
मा एडिनबर्ग, को बनाउँने ल्याब प्रवृत्ति छ र युरोप मा सबै भन्दा राम्रो कफी पसल मध्ये एक छ.
मान्छे थप लागि आफ्नो ढोका मा banging छ बनाउँने ल्याब विशिष्टताको. आफ्नो कफी मेनु आफ्नो आवेग एउटा नियममा छ.
यसलाई चार घुमाउँदा एकल मूल coffees विशेषताहरु. दुई आफ्नो उमालेर बनाउनु बार र आफ्नो एस्प्रेसो पट्टी अन्य दुई मा पीसा गरिएको छ. कफी र deliciously संग जोडी केक वा पेस्ट्री, जो बनाउँने ल्याबको कुनै कमी छ.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “10 सर्वश्रेष्ठ कफी मा युरोप लागि सर्वश्रेष्ठ क्याफेहरु” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cafes-europe%2F اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
क्याफे cafelover coffeeculture TravelBrussels TravelLondon TravelMilan ट्राभेलपारिस यात्राभियना TravelZurich